Ny marina ratsy momba ny famotsiam-bola any Dubai | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny fahazoana ny zava-misy marina amin'ny famotsiam-bola any Dubai dia zava-dehibe ho an'ireo miasa amin'ny sehatry ny teti-bola. Ity dia hetsika iray anaovana vola maloto havadika ho vola madio. Heloka bevava tokoa ny loharanom-bola; ny vola dia ampidirina amin'ny fomba izay manafina ny fomba nanaovana ny vola.
Mandritra ny fanatanterahana varotra ara-bola sy ny famoronana fifandraisana amin'ireo mpanjifa vaovao dia miankina amin'ny orinasa ny andraikitra. Ny tompona na ny fikambanana dia tokony hamantatra ny adidiny ary hanaiky ny toe-javatra toy izany any aoriana amin'ny vanim-potoana ara-barotra. Ny banky foibe amin'ny ankamaroan'ny fanjakana dia mamatsy ny AML sy CFT miaraka amin'ny torolàlana feno amin'ny ady amin'ny hetsika toy izany. Ireo politika ireo, rehefa ekena ara-pinoana, dia manome fiarovana ampy an'ireo banky hanakiviana ireo tranga tahaka izany.
Ny risika ateraky ny fitrandrahana vola any Dubai:
Ny loza mitatao amin'ny karazana fanodikodinam-bola rehetra dia ny banky miatrika loza mety hitranga amin'ny lazany. Ny risika dia mety hiteraka andrana ara-bola hiatrika sarany sy fanadihadiana isan-karazany. Ny sakana lehibe indrindra tsy maintsy esorin'ny banky dia ny tsy fahatokisana ny mpanjifa, izay mety hampidi-doza.
Loza io ateraky ny tsirairay, ny fizotrany ary ny rafitra anatiny. Fandrahonana izay ho anisan'ny asan'ny orinasa io. Miteraka fanakorontanana amin'ny fizotran'ny asa aman-draharaha.
Ny fandrahonana ara-dalàna dia mety hiteraka vokatry ny fisalasalana ihany koa momba ny hetsika ara-dalàna mivoatra ary tsy maintsy tantanan'ny orinasa.
Ny risika fifantohana
Ny fandrahonana toy izany dia misy ny tranga nindramin'ny banky vola tamin'ny vondrona iray; mifandraika amin'ny indostrian'ny banky izy ireo.
Anisan'ny vokatra lehibe atrehin'ny banky ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Vokatry ny fanodikodinam-bola be dia be ny vokany ratsy noho ny loza aterak'izany. Izy io dia mitarika ny banky hiatrika fatiantoka ary hampiakatra ny mety hisian'ny loza mitatao ary koa ny vidin'ny andrim-panjakana ara-bola.
Fikambanana mpanao heloka bevava manana tanjona telo rehefa manadio ny tombom-barotra amin'ny hetsika tsy ara-dalàna. Ireo dia:
mifandraika amin'ny hetsika tsy ara-dalàna ataony.
mba hampandany ny tombotsoany amin'ny famonoana heloka bevava sy hetsika fihetsika izay voarara.
mandray fahafinaretana amin'ny fahazoana ny hetsika tsy ara-dalàna
Ahoana ny fomba hiadiana amin'ny famotsiam-bola any Dubai, Abu Dhabi, UAE ary Sharjah:
Ny ady amin'ny famotsiam-bola dia sarotra ho an'ny andrim-panjakana rehetra. Any UAE, ny fomba amam-panao, ny fanaovana an-tsokosoko ary ny fampihorohoroana dia manasarotra ny fahitana ny fampindramam-bola mampiahiahy. Noho izany antony izany, ireo andrim-panjakana hafa, miaraka amin'ny banky, dia tsy maintsy ho mailo amin'ny fahafantarana ny mpanjifany sy ny fanaraha-maso ny asa ataon'ny mpanjifa.
Amin'ny firenena sasany, ireo andraikitra ireo amin'ny tranga maro dia hita fa mifanipaka amin'ny fomba amam-panao sy fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Dingana ataon'ireo manampahefana any UAE amin'ny fampiharana ny lalàna, torolàlana ary fitsipika mifehy ny fampihorohoroana AML / counter-terrorism. Na izany aza, afaka mahita lesoka marobe amin'ny paikady ara-bola sy ara-dalàna izay tsy maintsy arahana ianao:
Tsenam-bola be dia be no misy, ary tsy miditra amin'ny fifanakalozana ara-bola maromaro ny rafi-bola.
Ny fangatahana fandrakofana vola dia tsy apetraka tsy tapaka ary ny fanjakana sasany dia tsy mitaky fitakiana vola ho an'ireo olona miala any Etazonia.
Ny vondron-javatra ara-pahalalana ara-bola dia noforonina mifandray amin'ny fenitra iraisam-pirenena, saingy maro amin'izy ireo no tsy manana fizakan-tena, manam-pahaizana ary fandaminana ampy.
Tsy mora ny mahita fifandanjana mahatafiditra ny fanilihana ny zon'ny isam-batan'olona mifanohitra amin'ny filàna fiarovana ny fiarahamonina amin'ny mpampihorohoro sy ireo mpanao heloka bevava.
Fiarovana amin'ny famotsiam-bola any Dubai Reinforces:
Ny famotsiam-bola be dia ohatra tsotra amin'ny famindrana vola, matetika isaky ny firenena, hamitahana ny tompon'andraikitra hino ny vola kely azony tsy ara-dalàna dia avy amin'ny loharanom-pahalalana ara-dalàna ary koa hanafina izay niavian'izany. Avy eo dia misambotra vola ny tompon'andraikitra amin'ny lalàna izay hita fa misy ifandraisany amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Mpivarotra zava-mahadomelina: Ny mpivarotra zava-mahadomelina dia mazàna no mitantana vola be, ary sarotra ho an'ny manam-pahefana ny mamorona làlan-taratasy. Ny saina mena dia nakana vola be dia be.
Mobsters / andian-jiolahy: Sahala amin'ireo mpivarotra zava-mahadomelina, maro ny fifanakalozana vola no ataon'ireto olona ireto rehefa mitazona tamba-jotra azo antoka any ivelany.
Politisiana mpanao kolikoly: Amin'ny alàlan'ny fidirana bebe kokoa amin'ireo lobbyista sy tamba-jotra, ny hetsika fanodikodinam-bola dia mety ho iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hiarovana ny fananany. Ny ankamaroany, na iza na iza amin'ny toerana misy fahefana izay matetika no tsy manontany tena ny hetsika dia hanararaotra io asa io.
mpanambaka vahoaka: Ny tranga dia naneho fa ny olona izay naka vola tamin'ny toeram-piasany na mpampiasa dia handray andraikitra amin'ny fanafenana ireo fananana vao azo.
Con Artista: Izay olona vonona hamitaka olona amin'ny fananany dia vonona hanadio ny loharano navoakany.
mpampihorohoro: Mandray anjara betsaka amin'ny fanodikodinam-bola ny mpampihorohoro. Tsy maintsy omena vola ny hetsika fampihorohoroana; raha tsy izany, ny fitaovam-piadiana sy ny baomba dia tsy ho fananana azo.
Misy fepetra telo lehibe: fampifangaroana, fametrahana ary fametrahana.
toerana: dia mametraka ny vola "mahatsiravina" amin'ny orinasam-bola fanta-daza. Ny petra-bola dia foronina amin'ny vola. Ity dia hetsika mampidi-doza indrindra, miankina amin'ny fomba fanarahan'ny andrim-panjakana ara-bola ny lalàna miafina amin'ny banky na ny lalàna momba ny fanaovana tatitra eny amin'ny banky. Indraindray, ny mpanasa lamba dia hizara ny "karamany" amin'ny banky maromaro hampihenana ny vola napetraka.
layering: no dingana sarotra indrindra amin'ny fomba fanaovan-tànana. Izany dia mitaky ny hitarika ny vola amin'ny tanjona hanafenana ireo loharano amin'ny alàlan'ny andrim-panjakana. Mety mividy entana lafo vidy toy ny fiara, lakana na firavaka ireo mpanamory. Indray, ilaina ny manafina ny loharano.
fampidirana: dia ny tapany farany amin'ny fomba izay nidiran'ny tsena ny tolotra miaraka amin'ny fisehoana fa entina ara-dalàna amin'ny alàlan'ny varotra iray ara-dalàna. Eto dia afaka mamaritra ny fomba fampiasan'izy ireo ny loharanon-karenany, toy ny orinasa tsy miankina, ny mpanao fanadiovana vola mba "hahazoany tombony amin'ny orinasa" na "fandaniana amin'ny orinasa".
Ny famotsiam-bola dia lasa sehatra iray ifantohan'ny orinasa sy ny manampahefana satria nitatra ny sazy mihatra amin'ny firenena.
Miatrika fanasaziana ratsy kokoa aza ny orinasa, ao anatin'izany ny lamandy manodidina ny Dh300,000 sy Dh1.
Ny fehezan-dalàna mifehy dia vao mainka nohamafisin'ireo lalàna vaovao. Manasazy ny mpiasa, ny mpanara-maso ary ny mpikambana ao amin'ny birao izay tsy mitory famatsiam-bola mpampihorohoro na fanodikodinam-bola ataon'ny orinasany izy ireo, miaraka am-ponja hatramin'ny 36 volana, onitra hatramin'ny Dh100,000 na izy roa.
Sambany ny lalàna ihany koa no hiaro ny mpitsikilo vola amin'ny fanodinkodinam-bola any Dubai - mitatitra ny ahiahy momba ny famotsiam-bola na famatsiam-bola mpampihorohoro.
Maneran-tany, ny vidin'ny fanoherana famotsiam-bola dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha 53 isan-jato ho an'ny banky, mifanaraka amin'ny fanadihadiana KPMG.
Ireto misy fomba vitsivitsy azo ampiharina manampy anao hisorohana ity karazana hosoka ity:
Aloa amin'ny alàlan'ny taratasim-bola na amin'ny carte de crédit / debit fa aleo vola rehefa mividy entana sy serivisy ianao.
Raha vola no aloanao dia manizingizina ny tapakila amin'ny fisoratana anarana, raha misy izany.
Raha tsy izany, manantitrantitra amin'ny taratasy resy.
Aza mandany vola amin'ny volan'ny mpiasa ao an-trano.
Aza mandray fandoavam-bola be.